Ukuphupha ngomqolo wamazinyo ➡ ➡ Discover online Online ➡️
Iphupha malunga noMqolo wamazinyo
Amazinyo anomsebenzi obalulekileyo. Sizisebenzisa ukusika ukutya kwethu, nto leyo eyenza kube lula ukuginya kunye nokwetyisa okungcono. Izinyo elibuhlungu okanye elilahlekileyo yinto enkulu ecaphukisayo.
Ukongeza, umqolo ongenazimpazamo wamazinyo ikwangumqondiso wokuxinana ekuhlaleni. Ibonisa umntu ozikhathaleleyo kwaye unemali eyoneleyo yokulungisa amazinyo amoshakeleyo okanye agoso kwaye, ukuba kukho imfuneko, endaweni yamazinyo angengowamvelo.
Ukuba umntu uphupha ngothotho lwamazinyo, banokuceba ukutyelela ugqirha wamazinyo. Ukuba iphupha linamazinyo asempilweni, ngokuqinisekileyo ulinde ngokuzolileyo ukuqeshwa. Ukuba unomngxunya kwizinyo, ngokuqinisekileyo uya kuba noxinzelelo okanye ube namava oyikisayo kwiphupha lakho. Ukutolikwa kwamaphupha, imeko yomqolo wezinyo ibalulekile.
1 Isimboli yephupha «umqolo wamazinyo» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «umqolo wamazinyo» - ukutolikwa kwengqondo
3 Isimboli yephupha «umqolo wamazinyo» - ukutolika kokomoya
Isimboli yephupha «umqolo wamazinyo» - ukutolikwa ngokubanzi
Uluhlu lwamazinyo asempilweni lumele impilo kwaye amandla njengomqondiso wephupha. Kuba umqolo wamazinyo ubonakala kuye wonke umntu, ezi ndawo ziyaqwalaselwa kwaye zamkelwe ngabanye.
Kwitoliki yamaphupha, uphawu lwephupha lukwathetha ngokubanzi kwaye Amandla ezesondo kunye neemfuno ezithile. Ngokufanelekileyo, ukulala uziva womelele ngakumbi kwaye kufanelekile kwinqanaba lakho lobomi. Uluhlu lwamazinyo aqinisekileyo ephupheni lukwabonisa ukuzimela kwephupha.
Ukutolikwa ngokuchanekileyo kwamaphupha, kubalulekile ukumisela ukuba ujongeka kanjani umqolo wamazinyo kwaye kwenzeka ntoni kumazinyo ngamanye:
Ngelixa umqolo wamazinyo ophilileyo ubonakalisa impumelelo kunye neenzuzo, uphawu lwephupha lumkisa ngelahleko kunye nokuphazamiseka ukuba iphupha limalunga namazinyo agulayo okanye avulekileyo.
Ukuba izinyo elibolileyo lifumana ukuzaliswa, esi sisicelo seengxaki ezikhoyo ekutolikeni amaphupha. izisombululo fumana. Ukuba izinyo likhutshwe kumqolo wamazinyo okanye ukuba umntu uphulukana namazinyo ephupheni, okulindelweyo kwephupha kuyakuphoxeka. Uphawu lwephupha lwemigca engaphelelanga yamazinyo lukwalumkisa ngobunzima bezezimali.
Uphawu lwephupha «umqolo wamazinyo» - ukutolikwa kwengqondo
Iseti yamazinyo aveziweyo ibonisa uburhabaxa. Kutoliko lwengqondo ngokwamaphupha, umqolo obonakalayo wamazinyo ke ngoko luphawu lokuba Ukuzithemba kunye nokuphakama komntu ophuphayo.
Isimboli yamaphupha ikwamele amandla ezesondo. Ukuba iphupha lizama ukuluma umntu ephupheni, inkanuko kunye nomnqweno wokufumana inye kuphela kubonisiwe kuyo. Ukuba kuvela umsantsa kuphawu lwephupha "umqolo wamazinyo" kuba izinyo liyawa okanye kufuneka likhutshwe, uloyiko Potenzverlust kunye nokwehla komtsalane ngokwesondo. Iminqweno ecinezelweyo kunye neminqweno yenkanuko ikwabonakaliswa kumqolo ongaphelelanga wamazinyo.
Ukuba ukugqibelela komqolo wamazinyo kusengozini ephupheni, oku kunokuba luphawu lweemvakalelo zokucinezelwa kwetyala ekutolikweni kwephupha. Ngaphezulu kwayo yonke loo nto, ukuba iphupha liphulukana nezinyo phambi kwabantu ababukeleyo, uphawu lwephupha lunokufuzisela ukungqubana phakathi komfanekiso ozimeleyo kunye nexabiso labanye.
Ukuba amanye amazinyo akhululekile kumqolo wamazinyo, oku kushiya ukutolikwa kwephupha kwelinye. ubuntu obungazinzanga gqiba. Uphawu lwephupha lubonisa uloyiko lokungazi ukuba ekugqibeleni uphulukane nolawulo lomntu ngenxa yokungahambi kakuhle kwakho.
Isimboli yephupha «umqolo wamazinyo» - ukutolika kokomoya
Ngengqiqo yokomoya, uphawu lwephupha "umqolo wamazinyo" lunokuba lolunye Inkqubo yokuvuthwa ukuba. Ukukhula kunye nokulahleka kwamazinyo kuhamba nomntu ubomi bonke, ukusuka elusaneni ukuya emntwaneni, ukusuka kwinqanaba lokufikisa kunye nelabantu abadala ukuya kubantu abadala.
Ukuba umqolo wamazinyo ugqityiwe ngokudibanisa amazinyo amatsha, oku kungakhokelela ekukhuleni kwe- Amandla engqondo bonisa. Ukulahleka kwezinyo ekuchazeni iphupha kungatsalela ingqalelo kusiko oluzayo, umzekelo, ukusuka ukufa yomntu.